Yiba ngowokuqala ukuzama i-Photoshop CC kwi-iPad | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-iPad iya kuba malunga nokufumana i-Photoshop CC, usetyenziso lolu hlobo lwesixhobo esele silindelwe kwaye ngenxa yoko banokugcina ngokuhamba ngeekhompyuter zabo okanye iiMacs ukwenza umsebenzi wokuyila.
Kwaye oko I-Adobe ikhangela abavavanyi ukuvavanya i-Photoshop CC ye-Apple iPad. Ngamanye amagama, sinokuthetha kungekudala malunga nemisebenzi emininzi esinokuyenza ngaphaya kweekhompyuter zekhompyuter.
Ukungabinayo inkqubo efana neFotohop yeepilisi kuthetha ukuba usahleli ayiloqonga elifanelekileyo labayili, uyilo… Ke eli nyathelo lithathwe yiAdobe ukuqinisekisa ukuba iyakukhupha ingxelo epheleleyo yeFotohop CC ye-iPad, iya kuba ngaphambili nasemva kokuyila; Ngaphandle kokuba ngumsinga obalulekileyo wengeniso yeApple kwintengiso ye-iPad yayo.
Sithetha ngento onokuyenza hlela iifayile zePSD kwi-iPad ngezixhobo ezifanayo esihlala sizisebenzisa kuguqulo olupheleleyo lweFotohop kwiikhompyuter zethu zekhompyuter. Ukulindela ezo mvavanyo, ungangenisa isicelo sakho kuguqulelo lwe-beta ye-Photoshop ye-iPad.
Adobe uthembise ukuba siyakubanamava okwenyani kwaye apheleleyo Ifotohop kwithebhulethi yeApple. Siza kubona ukuba zonke ezo mpawu ziya kuba njalo yenkqubo esele siyibonile mva nje, nangona ininzi, ukufikelela koko i-Photoshop ibikuko kwiminyaka yakutshanje kunokuba ngaphezulu.
Ukuze ukwazi ukuthatha inxaxheba Uvavanyo lwe-beta Photoshop CC kwi-iPad kufuneke u yiya kule fomu. Yenye yeGoogle apho kufuneka ufake idatha, imibuzo kwaye ke uzame ukuba ngomnye wabo bakhethiweyo ukuvavanya le nkqubo kwi-iPad yakho. Inyathelo elithathiweyo ukuze sikhawuleze silibone kwezinye iisistim kwaye ngenxa yoko ayisosizathu sokuba nesixhobo esinye esinokonwabela ngokupheleleyo i-Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Adobe ifuna abavavanyi ukuvavanya i-Photoshop CC kwi-iPad